Posted by မေဓာဝီ at 10:49 PM
မေရေ...ရင်မောစရာပဲနော်။ စာမေးပွဲဆိုကြားလိုက်တာနဲ့ ကြောက်နေပြီ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ဖြေရတာ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်။ မေပြန်ရေးပြတာဖတ်ပြီး မေအောင်ကိုအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ စာတွေပြန်ရေးတော့မယ်ဆိုတာသိရလို့ တို့တွေပျော်နေပြီ။
4/01/2008 8:05 AM
မမေဒါဝီရေ - အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
whatever, u passed that exam.
i'm happy to read ur post.
Good Luck for remaining exam!!!
4/01/2008 9:37 AM
ဘလော့ရေးဖို့လည်း အချိန်ကောင်းကောင်း ရနိုင်ပါစေ
အောင်မလေးဗျာ။ ကိုယ်တိုင်ဖြေတဲ့ မမေဓါဝီတော့မသိ။ ဒီဘက်က ဖတ်ရတဲ့လူမှာလည်း ရင်တွေမော။ အဆုံးရောက်တော့မှ စာရေးဆရာနဲ့ ပြိုင်တူ ၀ှူးချလိုက်ရတယ်။ ဒါမျိုး ဖတ်ပါများရင် နှလုံးရောဂါရနိုင်တယ်။ ရေးတတ်ပါပေတယ်ဗျား။ နောက်ဘာသာတွေမှာလည်း အောင်မှတ်များများရပါစေခင်ဗျား။
Hi,a ma,blog ka ma so pa bu,a mya tan pat phyt tae.
9/28/2008 3:46 AM
ကျွန်မဆို စာရွက်နဲ့ဖြေရရင်ဒီလောက်ဟုတ်ဘူး ။ စာတွေရနေရင်တောင်မှ
ကွန်ပြူတာနဲ့ဖြေရပြီဆို ... အကုန်ဇောက်တိဇောက်ပြန်ပဲ .....
စာမေးပွဲခန်းထဲကထွက်လာရင် ဆံပင်တွေက မိုးကြိုးပစ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ... ။ (း
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားတော့ နားအေးတာပေါ့ ။ စိတ်ပူစရာလိုတော့ဘူး ။း)
1/24/2009 3:51 PM